Qaybtan soo kabashada barnaamijka - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>Step>so>Qaybtan soo kabashada barnaamijka
Qaybtan soo kabashada barnaamijka
Nidaamka loo adeegsado Bplandatarecovery, waxaad ogaan doontaa in Bplandatarecovery uu leeyahay howsha soo kabashada qeybta, sida hoos ku cad:
Raadinta ayaa lumay Qaybta
Geli hawlgal soo kabashada qaybti ah
Markaas daaqadda ikhtiyaariga ah ee raadinta qaybinta lumay way soo rogi doontaa, sida hoos ku cad:
Bplandatarecovery Xulashada xulashooyinka kala-qeybinta
Xaaladaha qaarkood, aad bay ugu habboon tahay in la isticmaalo hawlgalka soo kabashada ee qaybta, xawaaraha soo kabashadu aad ayey u dhakhso badan tahay, diskiga asalka ahna waa loo soo kaban karaa (ma lahan nuqul dheeraad ah oo xogtii soo noqotay), iwm. Si kastaba ha noqotee, qeybinta soo kabashada waxay leedahay baahiyo aad u sarreysa oo loogu talagalay isticmaaleyaasha, waxayna u baahan tahay faham gaar ah oo qeyb ka ah diskiga disk-ka asalka ah Marka ay tahay qeybinta nidaamka, waa in fiiro gaar ah la siiyaa bilowga nidaamka iyo arrimo kale. Qodobkaan kama sii sii socon doono. Wadahadal, adeegsadayaasha xiiseynaya ayaa ka arki kara dukumiintiyada caawinta ee khadka tooska ah ee shabakadda rasmiga ah ee Bplandatarecovery. Injineerrada dib u soo kabashada ee xirfadlayaasha ah, in kasta oo howlaha soo kabashada ee software-ka Bplandatarecovery lafteeda ay durba awood badan leedahay, Si kastaba ha noqotee, xaaladaha qaarkood, mararka qaarkood way ku habboon tahay in si toos ah wax looga beddelo cabbirrada qaldan iyo xogta muhiimka ah ee disk-ga adag. Caadi ahaan, markii la qabanayo hawlgallo la mid ah, aaladda WinHex ee qalabka guud ahaan ayaa la adeegsadaa. Xaqiiqdii, Bplandatarecovery wuxuu siiyaa qaybta waxqabadka tafatirka, kaas oo sidoo kale si toos ah u beddeli kara xogta ku jirta diskka adag, oo ay weheliso howlaha maamulka maareynta qaybta Bplandatarecovery, iwm., Way ka dabacsan tahay WinHeex , Ku habboon Xulo diskka adag ama qaybta, riix batoonka midigta, oo ku jira menu-ga-gaaban, xulo "furfuran qeybta 16-ka wax-ka-beddelka", sida ku cad halkaan hoose:
fananka Bplandatarecovery Tafatirka aagga
Gal hawlgalka tifaftirka qaybta oo si toos ah tafatirka xogta diskka
Ugudanbeyn, gudiga tafatirka qaybta ee qaybta ama diskka adag ayaa kasoo muuqan doona dhanka midig, sida soo socota Jaantus:
Bplandatarecovery qaybaha tafatirka
Iskuxirka iyo hawlgalka tafatirka waaxda waxay la mid yihiin WinHex, howluhuna sidoo kale waa isku mid, laakiin marka lagu daro Bplandatarecovery kale Shaqo, dabacsanaan badan oo ku habboon in la isticmaalo. Bplandatarecovery wuxuu taageeraa server Raid soo kabashada, adeegsadayaashu waxay u adeegsan karaan Bplandatarecovery si ay dib ugu habeeyaan Raid, ka dibna u soo ceshadaan xogta, sida ku xusan hoosta:
Keydka ugu weyn, aaladaha loo diyaariyey qalab qaali ah RAID
Bplandatarecovery wuxuu diyaariyey halbeeg RAID
> Isticmaalayaashu waxay ku dari karaan dariiqyo adag, waxay dejin karaan cabbirro sida nooca RAID, waxayna soo celin karaan xogta ka dib markay sameystaan ​​RAID dalwaddii. Soo kabashada RAID waa qalliin aad u horumarsan Adeegsadayaasha aan aqoonin RAID waxay la xiriiri karaan kooxda khubarada ee Bplandatarecovery si ay ugu hagaan hagidda RAID. Mashiinnada Virtual-ka aad iyo aad ayaa loo isticmaalaa Sidee loo istcimaalaa Bplandatarecovery si loo soo celiyo xogta mashiinnada dalwaddu? Waxaad ka fikiri kartaa inaad ku rakibto Bplandatarecovery mashiinka dalwadlaha ka dibna dib u soo kabashada xogta ...
Laakiin laguma talinayo in aad sidan sameyso. Qaabkan kaliya maahan cillad, laakiin mararka qaar u nugul dhibaatooyinka kale. Habka ugu fudud uguna hufan ayaa ah in lagu maamulo Bplandatarecovery kombiyuutar dhab ah, ka dibna lagu rakibo faylka diskooga ah ee mashiinka dalwaddu ka dib Markaad rakibto, waxaad ku soo celin kartaa xogta kombiyuutarka diskooga ah sida diskiga caadiga ah ee caadiga ah. Sida loo rakibo diskka adag ee loo yaqaan 'disk disk disk': menu main, disk disk-fur faylka diskka kombiyuutarka adag, sida ku cad halka hoose:
Adeegso Bplandatarecovery si aad u furto disk-ga mashiinka ah
Kala soo bixi Bplandatarecovery hadda oo aad la kulanto qalabkan awood badan ee soo kabashada.
PreDiskiga adag ee Hard Disk-ga iyo ogaanshaha
NextU disk ayaa si lama filaan ah u baaba'ay intii la isticmaalayay